Isikhokelo se-North East India Packages Travels Shayela ku-91-993.702.7574
Ubuncinci buhlola, umhlaba ongaqondakali we-northeast ngokungenakufaneka indawo eyimfihlelo yokutyelela. Ngokuqinisekileyo izulu elingachangekanga! I-North East India Travel Packages zenzelwe ngokukhethekileyo ukuba uhlolisise ilizwe elimangalisayo.
Efihliwe kwiintaba ezingenasiphako kunye neendawo ezihambayo ze-Himalayas, eNtshona-mpuma ye-Indiya yincinci yokuphandwa, i-otherworldly kunye nokuma phakathi kwezona ndawo zibalaseleyo eNdiya. Esi siqwenga sesizwe siyaziwa ngokuba yi-Seven Sisters 'Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland naseParura. Olunye uzuko olungabonakaliyo lwangasentla empuma Sikkim. I-Gangtok emangalisayo idonsa umlinganiselo omkhulu wabakhenkethi wonk 'unyaka wonke kwaye unyanzelekile ukuhanjelwa kwemfuneko nayiphi na into ebomini bakho.
Ixhunyiwe kwi-Indiya elandeleleneyo ngelizwe elincinane lomhlaba, eli lide elide kodwa lincomekayo elisezintabeni kunye neendwendwe zee-Buddhist zihamba ngokukhawuleza zicinga ngeendwendwe zaseNdiya kunye nakwiindwendwe zangaphandle.
Inkcubeko kunye neendawo, iNyakatho-mpuma ye-Indiya ihluke kwilizwe lonke kwaye kuyafana nokuphila kwelizwe. Ukufudumala kwamaBlue Mountains, ukunyusa umoya, amahlathi anamahlathi, izilwanyana ezinobuncwane bezilwanyana zasendle, inkcubeko yokuphila kunye nemisebenzi yezandla ziyakushiya ngeenkumbulo ezingakulibalekiyo.
Ezinye zeendawo onokuzicwangcisa ngazo uhambo lwakho zijikeleze Darjeeling, I-Kalimpong, i-Gangtok, iLashung, i-Kanchenjunga iNtlanzi, i-Yumthang Valley, i-Shillong, i-Pelling, i-Cherrapunjee, i-Park kaKaziranga, iGuwahati njl Khangela ezinye zeekhompyutheni ezisezantsi ze-North East India uze uceba uhambo lwakho ngokufanelekileyo!
Izikhululo ze-Hill eNorth East India